Nepalistudio » श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियाे ? अपनाउनुस् यी वास्तु टिप्स श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियाे ? अपनाउनुस् यी वास्तु टिप्स – Nepalistudio
श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियाे ? अपनाउनुस् यी वास्तु टिप्स
यदि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा तनाव छ भने यसमा तपाईं दुबैको गल्ती नभई तपाईंको घरको वास्तुदोष जिम्मेवार हुनसक्छ । वास्तुको हिसाबले घरमा राखिएको हरेक कुरा तपार्ईंमाथि सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ त्यसकारण तपाईं वास्तुका केही तरिका अपनाउनुहुन्छ भने बिग्रिरहेको श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्धलाई पुनः सुमधुर पार्न सक्नुहुन्छ ।
कुन दिशामा सुत्नेः
बेडरुममा कस्तो रङ लगाउने ?
बेडको कुन साइडमा सुत्ने ?
एउटा मात्र म्याट्रेस प्रयोग गर्नुहोस्ः
बेडरुममा इलेक्ट्रिक ग्याजेटको प्रयोग नगर्नुहोस्ः
बेडरुममा इलेक्ट्रिक ग्याजेटको प्रयोग नगर्नुहोस् । यदि बेडरुममा इलेक्ट्रोनिक्स राखिएका छन् भने पनि बेडभन्दा निकै पर राख्नुहोस् । यी ग्याजेटबाट निस्कने इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक वेभले निन्द्रामा समस्या निम्त्याउँछ भने पार्टनरबिचको सम्बन्धलाई पनि बिगार्छ ।
वास्तुका अन्य टिप्स
आफ्नो बेडरुममा दुई सुन्दर गमला राख्नुहोस्, यसले तपाईंको वैवाहिक सम्बन्ध सुखमय हुनेछ । आफ्नो कोठालाई सधैं सजाएर राख्नुहोस्, यसलाई फोहोर हुन नदिनुहोस् । प्रेम बढाउनका लागि सेरामिकले बनेको विन्ड चार्मको प्रयोग गर्नुहोस् । बेडरुममा सूर्यको प्रकाश व्यवस्था यस्तो हुन आवश्यक छ कि प्रकाश सिधा बेडमा नपरोस् । प्रकाश पछाडि वा बायाँपट्टीबाट आउनुपर्छ । वास्तुका अनुसार बेडरुममा ऐना बेडको ठिक अगाडि नराख्नुहोस् ता कि सुत्नेबेला कसैको प्रतिबिम्ब ऐनामा नदेखियोस् ।